Uzikhubaza njani izilumkiso zoqeqesho kwi-Apple Watch | Iindaba ze-iPhone
Uzicima njani izilumkiso zoqeqesho kwi-Apple Watch
UJordi Gimenez | 26/10/2021 12:00 | Apple Watch, Izifundo kunye neencwadana
Lo ngomnye wale mibuzo abanye benu besibuza rhoqo kwaye yiyo loo nto sithathe isigqibo sokwenza esi sifundo sincinci. Ngokwenene lo msebenzi lowo kwezinye iimeko yenziwe yasebenza ngokungazikhethelanga kwiisethingi zewotshi kwaye kulula ukuyicima.
Kwimeko yam, yenziwe yasebenza ngokuzenzekelayo (okanye ndingayivula ngaphandle kokuqaphela) kwinguqulelo yokugqibela ekhutshweyo yenkqubo yokusebenza ye-watchOS. Uninzi lwenu alunayo iyasebenza kodwa kukwalungile ukwazi ukuba singazivala njani ezo "Ukunqumama koqeqesho" okanye "umsesane wokuzilolonga ugqityiwe" izilumkiso, phakathi kwezinye.
I-Apple Watch iyakwazi sazise ngexesha elithile ngexesha loqeqesho kwaye oku kunokuthoba ingqondo. Lukhetho ukuba kwimeko yam yenziwe ngokwayo, andizange ndiyiqwalasele nangaliphi na ixesha. Ngoku siza kubona indlela yokuyivula okanye ukuyivula ngala manyathelo alula. Esi senzo sinokwenziwa kwiwotshi ngokwayo okanye kwi-iPhone, okokuqala siza kubona ukuba zikhubaza njani ezi zaziso okanye izilumkiso ezivela kwi-iPhone:
Sivula usetyenziso lweWatch kwi-iPhone
Cofa kuQeqesho ukhetho
Siskrolela phezulu kwaye sijonge ukhetho lokugqibela: Iimpendulo zelizwi
Kweli nqanaba siyabona ukuba ibonisa ngokucacileyo ukuba USiri unokusifundela izaziso malunga noqeqesho. Sivala okanye sivule kwaye kuphelele apho. Ukwenza oku kusebenze okanye ukucima ngokuthe ngqo kwi-Apple Watch kufuneka silandele amanyathelo afanayo kodwa kwiwotshi.
Sicofa isithsaba sedijithali kwaye sifikelele kwiiSetingi. Nje ukuba singene ngaphakathi sijonge ngokulula i-app yoqeqesho kwaye siye ezantsi ukuya fumana ukhetho «Iimpendulo zeLizwi» olu lukhetho ekufuneka siluvule okanye kule meko singasebenzi. Mhlawumbi njengam uye waluvula olu khetho ungaqondanga okanye lude lwenziwa lusebenze ngokuzenzekelayo, into ebalulekileyo kukwazi apho kufuneka siye khona ukuze lungasebenzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Uzicima njani izilumkiso zoqeqesho kwi-Apple Watch
Amahemuhemu amatsha alatha kutshintsho oluncinci kuhlengahlengiso lwe-iPhone SE 3 (okanye i-SE Plus)
Yintoni entsha kwi-iOS 15.1